समाजवादी र राजपाबीच एकता, केन्द्रीय समितिमा ८६० « Np Online TV
समाजवादी र राजपाबीच एकता, केन्द्रीय समितिमा ८६०
काठमाडाैं- राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टीले एकताका लागि छलफल तीव्र बनाएका छन् । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमनबाहेकका विषयमा दुवै पार्टीबीच अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको छ ।
सरकारबाट बहिर्गमनका विषयमा भने सहमति जुटाउन मुस्किल परेको नेताहरूले बताएका छन् । १५ दिनदेखि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक भएका अनौपचारिक वार्तामा अध्यक्ष मण्डल, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति, पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलगायत विषय सैद्धान्तिक रूपमा टुंगिइसकेका छन् ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई तथा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा वार्तासमितिका नेताहरूबीच दैनिकजसो अनौपचारिक वार्ता भइरहेका छन् ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले अहिलेसम्म भएका अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताए । ‘अहिलेसम्म भएको अनौपचारिक कुराकानी सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभामा दुवै पार्टीको समान स्तर भएकाले समान हैसियतमा रहेर नाम, झन्डा, सैद्धान्तिक अवधारणा, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संगठनको संरचना टुंग्याउनुपर्छ ।’
धेरैजसो विषयमा नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोली सदस्य रकम चेम्जोङले बताए । ‘कैयौँ विषयमा समझदारी भएको छ, तर लिखत उतारिएको छैन,’ चेम्जोङले भने, ‘शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र सांगठनिक संरचनाका केही विषय मिल्न बाँकी छन् ।’
‘नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो । लोकतान्त्रिक समाजवाद र संघीयतावादलाई आदर्श मानेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यांशलाई पार्टीको वैचारिक आदर्श बनाउनेमा समझदारी भएको छ ।
मिलेका विषय : चार अध्यक्ष
नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि एकीकरणपछि महाधिवेशनसम्मका लागि चार अध्यक्ष हुने अनौपचारिक सहमति भएको छ । चार अध्यक्षमा राजपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो तथा समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई राख्ने सहमति जुटेको पनि दुवै पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल राजपामा ६ अध्यक्ष छन् भने समाजवादी पार्टीमा दुई अध्यक्ष छन् ।
राजपाका बाँकी रहेका चार अध्यक्षलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राजपाले राखेको छ । त्यसमा चार नेता समाजवादी पार्टीका पनि थपेर आठजना वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राजपाको रहेको स्रोतले बतायो । राजपाले सबैभन्दा वरिष्ठ नेता भएकाले चार अध्यक्षमा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरीयता दिन राखेको प्रस्तावमा समाजवादी पार्टीका नेताहरूले समर्थन जनाएका छन् ।
दुवै तर्फका ४०–४० जना पदाधिकारी
अनौपचारिक रूपमा एकीकृत पार्टीको पदाधिकारी समिति ८० सदस्यीय हुने सहमति बनेको छ । त्यसमा राजपाबाट ४० र समाजवादी पार्टीबाट ४० जना राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अहिले समाजवादी पार्टीमा २५ पदाधिकारी छन् भने समाजवादी पार्टीमा एक सय २७ पदाधिकारी छन् ।
८६० सदस्यीय केन्द्रीय समिति
नेताहरूले केन्द्रीय समिति आठ सय ६० सदस्यीय बनाउने सहमति गरेका छन् । त्यसमा दुवै पार्टीबाट बराबर ४३०–४३० जना राख्ने सहमति बनेको छ । अहिले राजपाको केन्द्रीय समिति सात सय ८५ सदस्यीय छ । समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति चार सय ३० सदस्यीय छ ।
जिल्ला समितिमा बराबरी हैसियत
संघीय संसद् र प्रदेश सभामा दुई पार्टीको उपस्थिति बराबरीजस्तै रहेकाले जिल्ला तहमा पनि बराबरीको हैसियतमा भागबन्डा गर्न दुवै पक्षका नेता सकारात्मक छन् । अहिले समाजवादी पार्टीको ७७ ओटै जिल्लामा संगठन छ भने राजपाको ४८ जिल्लामा छ । दुवै पार्टीको संगठन भएको जिल्लामा आधा–आधा बाँड्ने, अध्यक्ष एउटा पार्टीको भएमा अर्को पार्टीको सचिव राखेर मिलाउने समझदारी छ । राजपाको संगठन नभएको स्थानमा पार्टी सदस्य लिएका नेता–कार्यकर्ता भएमा उनीहरूलाई पनि ‘एड्जस्ट’ गर्ने सहमति बनेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट